छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमतीलाई निर्घा’त कु’टपि’ट, संवेदनशील अंगमा पाइपले घोचिदिएको ग’म्भीर आ’रोप लगाउदै पिडित मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमतीलाई निर्घा’त कु’टपि’ट, संवेदनशील अंगमा पाइपले घोचिदिएको ग’म्भीर आ’रोप लगाउदै पिडित मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा । आजकल नेपालमा बिभिन्न श्रीमान र श्रीमती बीचका घ’टनाहरु घटिरहेका छन् । पाँचथर घर भएकि एक महिला रुँदै मिडियामा आएकी छिन । आफ्नो श्रीमानले दिनदिनै कु.टपि.ट गरेको भन्दै उनि मिडियामा आएकी हुन् । पाँचथर घर भएकी महिला र उनकी कान्छी छोरी अहिले झापामा आएका छन् । उनीहरुले घरमा आफ्ना बुबाले कु.टपि.ट गर्न्ने र अन्य दु.र्ब्य.बार गर्ने भन्दै आ’रोप लगाएका छन् ।
श्रीमानले कान्छी श्रीमती ल्याएदेखी हेला गर्न थालेको र कु.टपि.ट गरी आफुहरु ज्यान जोगाउन झापामा आफ्नो माइतीघर आएको भन्दै दुख पोखेका हुन् ।छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएको र आफूमाथि दिनदिनै कु.टपि.ट भएको भन्दै उनले मिडियामा आएर बताएकी छिन । आफ्ना छोराछोरीलाइ पनि बुबाबाट दु.र्ब्य.बार भएको भन्दै उनीहरुले आ’रोप लगाएका हुन् ।
उनले श्रीमानबाट केहि पनि सहयोग र साथ नपाएर उल्टै कु.टपि.ट हुने र आफ्नो ज्याननै खतरामा रहेको भन्दै दु’ख पोखेका छन् । पांचथरबाट भागेर माइत झापा आएका आमा र छोरीले आफुहरुसंग १ रुपैया पनि नभएको र श्रीमानको डरले पाँचथर घर फर्कन कठिन भएको बताएका छन् । प्रहरीमा उजुरी दिए पनि आफुहरुलाई अझै न्याय नमिलेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन ।
पि’डित महिलासंग गरिएको कुराकानी यहाँबाट हेर्नुहोस्ः
किन भने सचिनले इन्द्रेणीलाई यस्तो ? आमा सरितालाई छोराछोरि अब भेट्न नदिने तेजेन्द्रको भनाई ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
सविताको माईति पक्षले सन्तोष देउजाको घरमा पुगेर गरे गतिलो ४ प्रश्न ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ ०५ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे १९ तारिख